သားသားမီးမီးတွေ ငိုတဲ့အခါ မိခင်ရဲ့ဦးနှောက်က ဘာဖြစ်လာသလဲ? - Chit MayMay
Home Mom and Baby သားသားမီးမီးတွေ ငိုတဲ့အခါ မိခင်ရဲ့ဦးနှောက်က ဘာဖြစ်လာသလဲ?
မိခင်တွေအနေနဲ့ ကိုယ်အိပ်ပျော်နေချိန် ကလေးတွေ ထငိုမှာကို စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးအများစုက နာရီနိုးစက်သံသာ မကြားရင်နေမယ်၊ မိခင်ဖြစ်လာတဲ့အခါ အရာရာပြောင်းလဲသွားတတ်ကြပါတယ်။ ကလေးတွေ ‘အဲ့’ဆိုတဲ့အသံကြားတာနဲ့ ချက်ချင်းနိုးလာတတ်ကြပါတယ်။ ဒီဆောာင်းပါးမှာတော့ ကလေးတွေ ငိုတဲ့အခါ မေမေတို့ရဲ့ ဦးနှောက်က ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ငိုနေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အသံဟာ နာရီနိုးစက်သံနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မိခင်ရဲ့ဦးနှောက်အပေါ် လုံးဝကွဲပြားခြားနားတဲ့ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေကို သိပ္ပံပညာက ထောက်ခံထားပါတယ်။
Nature မဂ္ဂဇင်းမှ ထုတ်ဝေသော လေ့လာမှုတစ်ခုအရ လေ့လာသူတွေဟာ ကြွက်မေမေတွေကို Qxytocin ဟော်မုန်း(ကလေးမွေးချိန်နှင့် နို့တိုက်ချိန်မှာ အများကြီး ထုတ်လွှတ်တဲ့ဟော်မုန်း) ပေးခဲ့ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ မိခင်တွေရဲ့ဦးနှောက်က ငိုနေတဲ့ သူတို့ကလေးတွေရဲ့အသံကို စံမံဆောင်ရွက်ပုံ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒါက ဒီလိုအသံတွေကို ခွဲခြားသိမြင်အောင် ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာဟော်မုန်းက ကလေးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနှင့် ပတ်သတ်လာတဲ့အခါ ပိုပြီး sensitive ဖြစ်လာစေပါတယ်။ Oxytocinက ကလေးရဲ့ငိုသံ လက်ခံရရှိတဲ့ နားကို လမ်းချဲ့ပေးတယ်လို့ လေ့လာမှုမှ အဓိကလေ့လာသူ ရောဘတ်ဖရူမက်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် ကျွမ်းကျင်သူက ကြွက်မိခင်တွေ (သို့) လူမိခင်တွေမှာလည်း အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကလေးရဲ့အသံကို အရေးပေါ်ကိစ္စတစ်ခုအဖြစ် လက်ခံရရှိပါတယ်။
ဒီဇီဝကမ္မတုန့်ပြန်မှုက မိခင်တွေအား ကလေးရဲ့ငိုသံတွေကို အမြန်တုန့်ပြန်စေပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ မိခင်တွေဟာ ကလေးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ခွဲခြားသိမြင်ဖို့ သင်ယူလာကြပြီး သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအတွက် ပိုထိရောက်လာကြပါတယ်။
ကျွန်မတို့ကလေးငယ်တွေ ငိုကြွေးတဲ့အခါ သူတို့ဘာလိုအပ်သလဲဆိုတာကို ကျွန်မတို့အမြဲမသိဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုအသိစိတ်အတိုင်း ပြုမှုတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့က ကလေးကို အနှီးလဲပေးတယ်။ အစာကျွေးတယ်။ ပုခက်လွှဲပေးတယ် စသဖြင့်ပါပဲ။ တကယ့်တော့ ကျွန်မတို့ဟာ ကိုယ်ဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာကိုတောင်မှ မသိဘဲ ဒါကိုလုပ်နေကြတာပါ။
ကလေးတွေဟာ အရာရာတိုင်းအတွက် ကျွန်မတို့ပေါ်မှာပဲ လုံးလုံးမှီခိုနေရတာကြောင့် နောက်ဆုံးတော့ ဒီပြုစုပျိုးထောင်မှုစွမ်းရည်တွေကို ကျွန်မတို့သင်ယူကြရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဦးနှောက်မှာရှိတဲ့ ဒီဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲက ကလေးရဲ့ငိုသံကိုကြားတဲ့အခါ မိခင်တစ်ယောက်အား နိုးကြားစေတယ်လို့ အထူးကျွမ်းကျင်သူတွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်။
လူသားနဲ့ ကြွက်နှစ်မျိုးစလုံးမှာ ဖခင်တွေက သူတို့ကလေးငယ်တွေရဲ့ ငိုသံကို တုံပြန်လေ့ရှိကြပါတယ်။ သို့သော် သူတို့ရဲ့ဦးနှောက် ဓါတုဗေဒက အနည်းငယ်ကွဲပြားပါတယ်။ Oxytocin အပိုက ဖခင်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို အရှိန်မြှင့်မပေးပါဘူး။
မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ဦးနှောက်က ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ဦးနှောက်ထက် ခြားနားပါတယ်
NeuroReport မှလေ့လာမှုတစ်ခုအရ ယောကျ်ား၊ မိန်းမ ၁၈ယောက်ရဲ့ဦးနှောက်ကို ကလေးငိုသံကြားတဲ့အချိန်မှာ brain scan မှတဆင့် စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုက နိုးနိုးကြားကြားရှိကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုက ကလေးတွေရဲ့အသံကို စီမံတဲ့နည်းလမ်းမှာ gender ကွာခြားမှုရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ သို့သော် များစွာသော ဖခင်တွေဟာ သူတို့ကလေးတွေ ငိုနေစဉ်မှာ အိပ်မရ၊ အိပ်မပျော်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒီဖြစ်ပျက်မှုက အကြောင်းရင်းကောင်းတစ်ခုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ ကျွန်မတို့မျက်လုံးတွေ ပိတ်ထားရင်တောင် မိဘရဲ့ဦးနှောက်က ထိုးထွင်းသိနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုနဲ့ ငိုနိုင်စွမ်းရှိတာက ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ မတော်တဆမှု မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ အိပ်ဖို့ လိုအပ်နေရင်တောင် သူတို့ငိုသံတွေက ကျွန်မတို့ရဲ့ ဦးနှောက်ကို ထိုးဖောက်ပြီး အနက်ရှိုင်းဆုံးအိပ်မက်တွေကနေ လန့်နိုးစေပါတယ်။
Previous articleအသက်သုံးနှစ်အရွယ်မှာ ကလေးတွေ ဘယ်အရာကို သင်ယူကြသလဲ?
Next articleကိုဗစ်ကာလအတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သတ်တဲ့ သိထားသင့်သော အချက်များ